Nhau - Iyo pfupa china tafura tafura yakajeka kuratidza?
Britain yakagadzira bone china tafura yemakumi masere emakore. Mushure mekuvandudzwa kwakawanda kwepasirese, yakave imwe yemhando dzakasiyana dzevhu dzevhu. Bhonzo china tafura yetafura zvirokwazvo haina kukodzera kushongedza tafura yemuchato, nekuti mapfupa akaomarara uye akatsetseka magadzirirwo, anowirirana neiyo yakachena, yakatendeka uye ine rudo rwewanano. Sezvo inopfuura chetatu yemadota emashizha akawedzerwa kune iyo ivhu, bone china inotumidzwa zita rayo rakakosha kuratidza uye kuumbika kwevhu. Neye yakasarudzika nzira yekupfura, zvimwe zvakasviba muvhu zvinobviswa, zvichikonzera kuchena bone china, isina kusimba, yakajeka, yakareruka, isina hushoma, uye yakatetepa kupfuura porcelain, mune yakasarudzika yakachena kuona
pfungwa. Uye zvakare, iwo mapfupa akaomesesa zvakanyanya. Mune mana emabhonzo china tii coasters eRolls-Royce mavhiri, aya mana kristaro makapu anotsigira huremu iyo RV inogona kupukunyuka!
Natural yakasviba chena bone bone china inowanzo shandiswa muWestern muchato tafura. Iko kusarudzika kwakasarudzika kwekunzwa kwepfupa rechisikigo, pamwe neakajeka maruva uye shiri yakavezwa porcelain kana yakasarudzika curve dhizaini, inogara iri tafura yakasarudzika. Kamwe iyo pfupa china petafura uye yakajeka-yakajeka kana yakajeka maruva etafura, iwo akachena uye erudo mwenje wemaruva etafura anonongedzwa nematanho, iwo anoonekwa kubva patafura setoni toni, mitsara yakanakisa uye kuravira kwakanaka. Iyi mhando yekusakendenga uye inoyevedza, yakakosha, semuchato wechinyakare pachawo, pasi peyakajairika mamiriro, inoda kungwarira manejimendi uye kubudirira.
Iwo maratidziro epfupa china ari emhando yepamusoro. Inofananidzwa neyakajairika echinyakare porcelain, bone china ine yakanaka mwenje transmittance, uye inogona kuratidza inoyevedza, yakajeka uye yakachena mameseji senge jade. Uye zvakare, bone china ine hunhu hwepurasitiki yepamusoro, inogona kuita kuti glaze ruve rwakatsetseka, zvine mavara zvakapendwa, uye rakaoma uye rakasimba. Zvikuru zvekushandisa: seti repfupa china tafura, pfupa china mugs; inokodzera ruzhinji: seti yefupa china tafura inokodzera kwazvo kusangana kwemhuri neshamwari, mhuri yese ine chinwiwa, uye inogona zvakare kushandiswa sezvipo kumuchato uye kupisa mumba kwehama neshamwari; mutengo wemusika: seti repfupa china tafura ndeye High-end tableware kazhinji ine mutengo wakakwira.
Tafura yematafura ane mapatani esimbi, akadai sekucheka kwegoridhe, kutenderera kwesirivheri, nezvimwewo, haigone kuiswa mu microwave; hazvina basa mu steamer.